Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Javier Hernandez nwa akụkọ akụkọ na-enweghị ihe ọhụụ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara aha na aha njirimara; "Chicharito". Anyị Javier Hernandez Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Onye Okike Akụkọ Akụkọ Mexico na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ ihe ọmụma banyere ya.
Dimitri Payet Child Story Plus Ihe Na-adịghị Eke Echiche Eziokwu
Ee, onye ọ bụla maara banyere ebumnuche ya ịchụ nta ikike mana ole na ole na-ele Javier Hernandez's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Javier Hernandez Akụkọ nwata - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Javier Hernandez Balcázar mụrụ na 1st nke June 1988 na Guadalajara, Mexico. Amuru ya nne ya, Silvia Balcázar na nna ya, Javier Gutiérrez.
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, Chicharito malitere igwu egwu na ntụrụndụ Mexico mgbe ọ dị afọ asaa dịka e sere n'okpuru.
Ọ tolitere na Morelia ebe nna ya nke aha ya bụ Javier gbara bọọlụ maka ndị otu egwuregwu, Monarcas Morelia.
Ọzọ mgbe ọ bi na Morelia, ọ gara ụlọ akwụkwọ elementrị na Instituto Piaget ebe ọ gụrụ akwụkwọ site na nke atọ ruo nke isii wee kpọọ egwuregwu bọọlụ nke ụlọ akwụkwọ ahụ.
A maara Chicharito mgbe niile ka o nwee ihu nwa kemgbe ọ bụ nwata.
Mgbe ọ dị afọ itoolu, Hernández sonyeere CD Guadalajara wee bịanye aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya mgbe ọ bụ 15.
Mgbe Hernández na-agba bọl na ọkachamara, ọ nọkwa na-agụ akwụkwọ nchịkwa azụmahịa na Universidad del Valle de Atemajac nke a makwaara dị ka Mahadum Onwe na Zapopan, Mexico.
Javier Hernandez Biography - Nkwụsịtụ Na:
Ọ bụ nwa oge tupu ọrụ Hernandez apụ n'ezie. O gosiputara ngwa ngwa maka Chivas mgbe o sonyechara na nke mbụ ha na 2006 ma nwee obi abụọ banyere ọdịnihu ya.
Naanị ndidi ya na nnọgidesi ike ya nyeere ya aka inwe ọganihu, dịka nna ya si kwuo.
Manchester United bu ụzọ mara Hernández na Ọktoba 2009. Ha zigara ndị na-agụ akwụkwọ ka ha gaa Mexico na Disemba bụ onye kọọrọ akụkọ ọma mgbe ọ lere naanị egwuregwu ole na ole ọ na-egwu.
N'ihi afọ Hernández, ụlọ ọrụ ahụ zubere na mbụ ichere tupu ha agaa ịbanye ya, mana ike ya na ndị otu mba na World Cup mere ka ụlọ ọrụ ahụ nwee ego.
Iji jide n'aka na ha na-eme ihe ziri ezi, Alex Ferguson aghaghị ịkụziri onye isi nchịkwa United, Jim Lawlor, ka ọ gaa Mexico maka izu atọ na February na March iji lee Hernández.
Jim dekwara akụkọ ọma ọzọ banyere ya. Nke a mere ka edechara akwụkwọ niile. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Lety Sahagun na Javier Hernandez Storyhụnanya Akụkọ:
Nnyocha na-egosi na ladies na-adọrọ mmasị na ihu mmadụ, n'oge ndị a, ọ ga-adọrọ mmasị na ha nwoke enwekwu nwanyị ma ọ bụ ihu nwa maka ihunanya.
Nke a bụ ihe banyere Javier Hernandez aka Chicharito ndị nwere nnukwu uru nke inwe ihu nwa.
Malite, Lety Sahagun nke a na-esere n'okpuru ebe a bụ nwata nwanyị mbụ mara mma nke Javier "Chicharito" Hernandez.
Beautiful Lety Sahagun nke dị n'okpuru ebe a bụ nwa nwanyị nke otu n'ime ezinụlọ ndị kachasị ùgwù na ndị na-agbanwe agbanwe na Jalisco nile.
Ndị mụrụ ya bụ Lety Acevedo de Sahagun na Jamie Sahagun. Sahagun blọọgụ banyere ejiji na ụdị.
Ọ na-agakarị n'ụlọ ngosi ihe nkiri iji chọpụta mkpokọta ndị nrụpụta ọhụụ ọ chere na ha ga-ekwu nkwuwa okwu na ụwa ejiji.
Dị ka ọ na-akpọ ya Chicharito mgbe niile, nke ya bụ Lety nke bụ ụdị dị mkpirikpi nke Leticia. Lety nwere ụmụnne atọ Rodrigo, Jaime na Renata Sahagun.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na kọleji ọ gara Monterrey, Nuevo Leon ebe a na-amụ ya Mmekọrịta Mba.
N'oge ahụ, ọ maghị ihe gbasara enyi ya nwoke na-abanye na Manchester, mgbe ọ nụrụ na ọ nweghị ike ijide anya mmiri ya.
Chicharito anọworị na Manchester tupu ya ahapụ ya na tiketi ụgbọ elu mepere emepe ịbịa. Lety soro onye ome iwu ya gaa Manchester.
Innọ na Manchester United nwere ihu nwa pụtara n'ezie ihe ndọpụ uche maka Chicharito. Nke a metụtara mmekọrịta ya n'ezie.
Chicharito kewara na Lety bụ onye hụrụ ya ka ọ mere ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba ọsọ na ọkwa ụwa.
Bịa Manchester yana ụmụ nwanne nne ya ndị ọzọ ka ha wee nwee mmekọrịta ya na ya arụpụtaghị.
Mmekọrịta Javier Hernandez na Chaska Borek:
Mgbe Lety, ọ kwagara. Tupu ọ gawa, e nwere nrọ na Chicharito n'ịghọ aghụghọ ule na ya. Nwa nwanyị a jụrụ ajụjụ bụ Chaska Borek dị n'okpuru ebe a.
Chaska Borek na-asụ German, Bekee, na French nke ọma. Nwa agbọghọ mara mma nke Hawaii bụkwa onye na-eme ihe nkiri. Borek gụrụ akwụkwọ na Mahadum Cambridge ma amụrụ ya nne America yana nna Hawaii
Chicarito ka ya na Borek na-eri nri abalị na ụlọ oriri na ọ Gloụ Gloụ Globe na England. Isi ihe na-ekwu na ha abụọ rịọrọ ka ha ghara igbochi ha n'oge nri abalị site na Paparazzi ka ha abụọ si n'ọnụ ụzọ azụ pụta mgbe ha risịrị nri.
Ọbụna na-anụtụ ya ka o kwuo okwu na akaụntụ Facebook ya ụbọchị ụbọchị ụlọ nri ha gụrụ "Na-efu ya ... Echere m na Mexico."
N'agbanyeghị ebubo ndị a, ndị enyi nke Sahagun na Hernandez na-ekwu na di na nwunye ahụ na-agbasi ike ma na-enwe nkwukọrịta mgbe niile. Agbanyeghị, nke a abụghị ikpe dịka ihu nwa na-aga n'ihu.
Mmekọrịta Javier Hernandez na Lucia Villalon:
Na 2015, Javier Hernández malitere mmekọrịta ya na Lucia Villalon dị n'okpuru.
Akụkọ na-egosi na Lucia nọ na mmekọrịta Cristiano Ronaldo otu afọ, 2015. Ha abụọ na-eji oge ha jikọta ibe ha, ya mere mmekọrịta dị mkpirikpi.
Mmekọrịta ya na Camila Sodi: Na 2017, Javier Hernandez malitere mmekọrịta ya na onye omekorị Mexico, Camila Sodi onye ọ na-ewere dị ka onye ikpeazụ, otu na naanị.
Javier Hernandez Ndụ Nke Onwe:
Ihu nwa Face Javier Hernandez AKA Chicharito nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike nke Chicharito: Ọ bụ onye dị nro, onye nwere ọmịiko, onye na-achọ ịmata ihe, nke nwere ike ịgbanwe ihe ma nwee ike ịgbanwe echiche ma mụta ngwa ngwa.
Adịghị Ike Chicharito: Ọ na-atụ ụjọ mgbe ụfọdụ, na-ekwekọghị ekwekọ na enweghi obi abụọ.
Ihe Chicharito nwere mmasị: Nri ndị Mexico, egwu Mexico, ụmụ nwanyị mara mma, na-eme njem n'ime obodo ya, akwụkwọ akụkọ ma soro onye ọ bụla kparịta ụka.
Ihe Chicharito anaghị achọ: N'ịbụ onye na-enweghị ndidi, Ịnọ naanị ya, ịbụ onye a na-egbochi, ịmeghachi usoro ọzụzụ.
N'ihe dị mkpa, Chicharito na-anọchite anya mmadụ abụọ dị iche iche n'otu na ị gaghị ama onye ị ga-eche ihu.
Ihe ọma banyere ya bụ na; ọ na-eme udo, na-ekwurịta okwu ma dị njikere maka ntụrụndụ. O nwekwara udiri ike na mberede na mberede, echiche na izu ike.
Javier Hernandez Ndụ Ezinụlọ:
Football, ọrụ dị mma dị n'ọbara Hernandez. Nke a pụtara n'ụzọ nkịtị ịbịa site n'ezinụlọ bara ọgaranya.
Nna nna ya meriri France na 1954 World Cup, ihe Hernandez gosipụtara na mbipụta 2010 site na ịbịakwute France.
Ọ bụ ihe mgbaru ọsọ 50th nke Mexico na World Cup, na-abịa ụbọchị 10 tupu ụbọchị 56th nke nna nna ya. E gosipụtara nna ya nke dị n'okpuru ebe a na World Cup - na ala ụlọ na 1986 FIFA World Cup.
Nna ya, Javier Hernández Gutiérrez, kpọkwaara klọb atọ dị iche iche na Mexico tupu ịla ezumike nká ịbụ onye njikwa.
Hernández Gutiérrez kwụsịrị ọrụ ya dị ka onye njikwa nke ebe nchekwa Guadalajara iji lee Hernández egwu na 2010 World Cup na South Africa.
Nne: Silvia Balcázar bụ nne Javier Hernandez. Ọ bụ nwunye na-arụ ọrụ oge niile na-akwado di ya na nwa ya nwoke hụrụ bọl n'anya.
More banyere nna nna ya: Hernández bụkwa nwa nwa Tomás Balcázar, onye kpọkwara Guadalajara wee kpọọ otu mba na 1954 FIFA World Cup.
Javier Hernandez Biography - Aha otutu:
A maara Hernández dị ka Chicharito, nke pụtara obere agwa na Spanish, ma na-ebu aha na uwe elu ya. Aha ahụ pụtara (ike) n'ihi anya ya na-acha akwụkwọ ndụ.
Ọzọkwa, ndị mmadụ na-akpọ ya Chicharito n'ihi na aha nna ya bụ El Chicharo na-ezo aka na anya ya dị ntakịrị.
Chicharo pụtara agwa na Spanish na nna ya nwere anya akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọ bụ ya mere ha ji akpọ ya Chicharo.
Javier Hernandez Nwatakiri Ihe omuma - Ihe omuma:
Chicharito bụkwa ihe nkiri eserese na Mexico, na usoro aha ya Mucha Lucha.
Usoro ihe nkiri ahụ gụnyere nke Borussia Dortmund Shinji Kagawa na ọtụtụ kpakpando ndị ọzọ nke bọọlụ ụwa, gara aga na nke ugbu a.
Ọ bụkwa nnukwu onye na-ese ihe nkiri: “Apụghị m ile ihe ọ bụla na TV,” ọ gwara Futbol Total, na-agbakwunye na ọ na-ahọrọ ndị dike dị ka Superman.
Javier Hernandez Okpukpe:
Hernández bụ ezigbo onye Roman Katọlik. A maara ya nke ọma maka emume egwuregwu tupu ya emee ebe ọ na-egbu ikpere ya wee kpee ekpere nke ọ na-eme n'ihu ọtụtụ egwuregwu.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị bụ Javier Hernandez Akụkọ na akụkọ eziokwu ndị ọzọ. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.